Waa Maxay Bitcoin? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — January 27, 2020
Bitcoin waa lacag dhijitaal ah oo la sameeyay bishii Janaayo 2009. Bitcoin waxaa loo yaqanaa ‘cryptocurrency’. Suuqyada loo yaqaano “isweydaarsiga bitcoin” waxay dadka u oggolaadaan inay iibsadaan ama iibiyaan bitcoins iyagoo adeegsanaya lacagaha kala duwan.
Bitcoin waa lacag cusub oo uu abuuray qof aan la garanaynin oo isticmaalaya magaca loo yaqaan ‘Satoshi Nakamoto’. Isweydaarsiga lacagaha (transactions) waxaa la sameeyaa iyada oo aan lahayn cid dhexe ee maamusha lacagaha – macnaha, bankiyo ma leh!
Bitcoin waxaa loo isticmaali karaa in lagu kiraysto hotellada iyadoo lagu isticmalaayo Expedia, ku dukaamaysiga alaabaha guryaha la dhigto iyadoo la isticmalaayo Overstock iyo kuwa lagu iibsado ciyaaraha Xbox. Laakiin inta ugu badan waxay dadka u isticmaalaan inay taajir ku noqdaan. Qiimaha bitcoin ayaa noqday kumanaan kun sanadkii 2017.
Bitcoins waxaa loo adeegsan karaa iibsashada alaabada si qarsoodi ah. Intaas waxaa sii dheer, bixinta lacagaha caalamiga ahi waa sahlan yihiin waana raqiis, sababta oo ah bitcoins-ka kuma xirna waddan ama xeer hoosaad. Ganacsiyada yaryar waxay u tahay fursad, maxaa yeelay ma jiraan ajuurada kaararka deynta. Dadka qaar waxay u iibsadaan Bitcoins-ka sidda maalgashi, iyagoo rajeynaya qiimo koror ku kordhaayo Bitcoins-kii ay iibsadeen.
Bitcoin wuxuu ku shaqeeyaa barnaamijka loo yaqaan ‘Blockchain’, kaas oo ugu dambeyntii ah mid soo jiidasho leh oo xiiso badan.
Blockchain waa kayd xog urursi oo aamin ah oo ay wadaagaan dhammaan dhinacyada ka qaybqaadanaya shabakadaha kumbuyuutarro la aasaasay, oo la qaybiyay.
Halkee laga iibsadaa Bitcoins?
Waxaa jira tallaabooyin kala duwan sida loo iibsado baako. Marka ugu horeysa waa in la helo jeebka. Jeebka waa meesha aad ku kaydiso baakadahaaga. Waxay u shaqeysaa sida koontada bangiga kuugu kaydiso lacagtaada, farqiga u dhexeeya waa in aad haysatid jeebka siyaabo kala duwan. Ugu horreyn waa adigoo gelinaya boorsada software-kaaga oo ah qalabka kombiyuutarkaaga. Marka labaad, waxaad isku dayi kartaa internetka, adeegga caarada ee internetka. Ugu dambeyntii, waxaa jira adeegyo taxane ah oo ilaaliya jeegagyo badan oo saxiixa kuwaas oo u baahan furayaal badan si ay u ilaaliyaan xisaabtaada.
Ka dib markaad hesho boorsada jeebka, talaabada soo socota waxaay heleysaa bacahaaga. Habka ugu horeeya ee loo soo iibsado waa iyada oo loo marayo is-dhaafsiga Bitcoin. Waxay u shaqaysaa sida isbedelka heerarka ajnabiga ah ee u shaqeeyo. Goob kale oo lagu helo baco waa suuqa. Haddii aad tahay mid iibiya ama bixisa adeeg, waxaad bedeli kartaa bacaha.
Dad badan oo iibiya bacarin ayaa faa’iido badan leh. Waxay iibsadaan marka ay weli tahay raqiis markaa iibiso marka ay korodho qiimaha. Waxaa jira laba siyaabood sida loo iibiyo baako: Iibinta Online iyo iibinta Shakhsi ahaaneed. Kuwa hore waxay u dhexeeyeen is-dhaafsiga internetka, halka kan dambe uu si toos ah ugu iibiyo dadka. Waxaa lagu sameeyaa iyada oo la eegayo lambarrada QR ee casriga ah iyo qashinka bacrimiga ah ee wareejinta lacagta caddaanka ah.
Haddii aad weydiiso sida loo kaydiyo baako, waxaad ku keydsan kartaa jeebka, jeebka gacanta, boorsada internetka, jeebka ceymiska, ama boorsada USB-ga Ledger USB. Mid kastaa wuxuu leeyahay faa’iido iyo faa’iido daro. Dhammaan waxay ku xirantahay midka ku habboon adiga kugu habboon.
Waa kuwaan liiska 5-ka websaydh ee ugu caansan meesha aad ka iibsan karto Bitcoins isla markaaba adigoo adeegsanaya Debit-kaaga ama kaararkaaga Credit-ka
Maanta, inta badan isweydaarsiga Bitcoin waxay aqbalaan noocyo badan oo lacag bixin ah. Waxa ka reeban waa kaararka amaahda iyo deynta ah, taasi waa sababta dabeecadda Bitcoin-ka aan waxbo laga beddeli karin.
Gunaanad, Bitcoin waa mid ka mid ah lacagaha ugu horreeya ee dijitaalka ah ee loo adeegsado tikniyoolajiyadda isku-filka ah si loo fududeeyo bixinta degdegga ah. Shakhsiyaadka madaxa bannaan iyo shirkadaha leh awoodda xisaabinta kumbuyuutareed ee ka qaybgalaya shabakadda Bitcoin, oo sidoo kale loo yaqaan “macdan qodayaasha”, waxaa dhiirigeliya abaalmarinno (sii deynta bitcoin cusub) iyo khidmadaha macaamil ee lagu bixiyo Bitcoin-ka.
Macdan-qodistayaasha waxaa loo aqoonsan karaa inay tahay awood baahsan oo fulisa kalsoonida shabakada Bitcoin. Bitcoin cusub ayaa loo sii daayaa macdan qodayaasha waqti go’an, laakiin xilliyo ayaa hoos u dhac ku yimaado, taas oo ah in wadarta guud ee Bitcoins ay ku dhowdahay 21 milyan. Waqtigaan la joogo, waxaa jira qiyaastii 3 milyan oo Bitcoins ah oo aan weli wax lagu qodin. Macdanta “Bitcoin” waa macdanta loo yaqaan ‘bitcoins’ oo loo sii daayo wareegga. Guud ahaan, macdan qodista waxay ubaahantahay xalinta hal-abuurka adag ee xisaabinta si loo helo dhisme cusub, kaas oo lagu daro blockchain.
Tags: Waa Maxay Bitcoin?
Next post Aanadii Negeeye – Qeybtii 29aad
Previous post Maxaad Ka Taqanaa Cudurka Qarow Socodka?
January 27, 2020 at 12:29 pm	— Reply
Waaa qormo aad umuhiim ah oo sookoobtay bitcoin ka wuxuu yahay iyo qaababka loo isticmaalo.
wax badan baan ka faaiday aniga ahaan aad baad umahadsanthy qoraa Abduljabar shiekh